Wasiirka caafimaadka ee dalka Ingiriiska Oo laga helay Corona Virus | Berberanews.com
Home WARARKA Wasiirka caafimaadka ee dalka Ingiriiska Oo laga helay Corona Virus
Wasiirka caafimaadka ee dalka Ingiriiska Oo laga helay Corona Virus
London (Berberanews)- Wasiirka caafimaadka ee dalka Ingiriiska, Nadine Dorries ayaa sheegtay in laga helay xanuunka coronavirus, cudurkaasi oo haataan laga daweynayo.
Waxay intaa ku dartay inay ka walwalsan tahay hooyadeed oo 84 sano jir ah, haatanna qufaceysa, taas oo la maleynayo inay qaadsiisay xanuunka.
Siyaasiyiinta kale ee la kulmay haweeneydaas ayaa haatan lagu wadaa in laga baaro xanuunka corona.
“Waan dareemi karaa sababta dadka ay uga walwalsan yihiin xanuunkan, waxaan sameyn doonaa waxwalba oo karaankeena ah, si looga shaqeeyo badqabka dadka,”ayay tiri.
Dalka Britain ilaa iyo hadda waxaa laga sameeyay 25 kun oo baaritaan, waxaana saraakiisha caafimaadka ee dalkaas ay sheegeen inay ka shaqeynayana sidii ay ula tacaali lahaayeen haddii kiisas horleh ay soo baxaan.
Xanuunka Corona, dhaqaalaha adduunka oo keliya ma uusan saameynin oo waxaa lagu soo warramiyay in uu sidoo kale saameyn ku yeeshay ciyaaraha kubada cagta.
Maalinta arbacada waxaa uu qorshaha ahaa inay wada dheelaan kooxaha Man City iyo Arsenal, kuwaas oo u ballansanaa ciyaar katirsan horyalka Ingiriiska, balse ciyartaas waa la baajiyay.
Sababta arrintan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii looga gaashaman lahaa faafidda xanuunka oo fara ba’an ku haya dalal badan oo caalamka.
Sidoo kale milkiilaha kooxda kubada cagta ee Olympiakos, Evangelos Marinakis, ayaa isna laga helay xanuunka Corona.
Previous articleHargeysa: Jaamici Tagsiile ah
Next articleCirro oo guddi u magacaabay kala xulista murrashaxiinta Doorashada